ज्याननै लिने स्क्रब टाइफस रोग कसरी लाग्छ, बच्न के गर्ने ? - Ankuran Khabar
ज्याननै लिने स्क्रब टाइफस रोग कसरी लाग्छ, बच्न के गर्ने ?
२०७८ असार २४0
पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालमा स्क्रब टाइफसका बिरामी बढेको देखिन्छ । यो रोगले धेरैको ज्याननै लिएको छ । प्रत्येक वर्ष विशेषतः वर्षा याममा स्क्रब टाइफसका बिरामी देखापर्छन् । स्क्रब टाइफस कसरी लाग्छ ? यसका लक्षण के कस्ता हुन्छन् ? र कसरी बच्ने ? अंकुरण खबरसंगको कुराकानीमा कन्सलटेन्ट फिजिसीयन डा.खेमराज भुसालको सुझाब यस्तो छ…
मानिसबाट मानिसमा नसर्ने एक प्रकारको जीवाणु ‘रिकेटसिया सुसुगामुसी’ले संक्रमित सूक्ष्म कीरा (माइट)को टोकाइका कारण लाग्ने सरुवा रोग नै स्क्रब टाइफस हो ।
स्क्रब टाइफसको संक्रमण बढी हुने संभावित ठाँउ :
यो रोग प्रायः गरेर वर्षायाममा बढी देखापर्दछ । मुसामा लाग्ने किर्ना अर्थात् माइट प्रायः घाँसको झाडी, खेतबारी, वनजङ्गल, घाँस भएको चौर,घर वरिपरिको घुरान आदिमा हुने गर्दछ । बिना साबधानी यस्ता ठाँउमा जाँदा या काम गर्दा यो रोगको संक्रमण हुने गर्दछ । साथै मुसाको सम्पर्कबाट पनि यो रोग सर्छ ।
स्क्रब टाइफसका लक्षण रुघा खोकी साथै डेंगुका लक्षणसंग पनि प्रायः मिल्दा जुल्दा हुन्छन् । यद्यपी निम्न लक्षण देखिए स्क्रब टाइफसको शंका गर्नुपर्छ
१.ज्वरो आउने,ज्वारो बढी आउँने भएकाले कहिलेकाही काम ज्वारो समेत आउँन सक्छ ।
२. धेरै टाउको दुख्ने ।
३. पसिना आउने ।
४. थकाई लाग्ने ।
५.झाडापखला लाग्ने ।
६.खोकी लाग्ने ।
७·आँखा रातो हुने दुख्ने ।
८·केही निल्दा दुख्ने,खान मन नलाग्ने ।
९.आलस्यपन आउँने ।
१०.किराले टोकेको ठाँउमा दाग बस्ने ।
यो रोग लागेको कसरी थाँहा पाउँने ?
यदी कुनै विरामीमा माथिका लक्षण देखा परेमा रगतमा एन्टीजेन परीक्षण गरि रोग लागे नलागेको एकीन गर्न सकिन्छ ।
कुनै पनि रोगबाट बच्ने उत्तम उपाय भनेकै रोग लाग्नै नदिने वातवरण निर्माण गर्ने हो । यसका लागि सकेसम्म झाडी, बनजंगल, घाँसपात हुने ठाँउमा जानु हुदैन् । यदि जानै परे खेतबारीमा काम गर्दा, वनजङ्गल वा झाडीमा काम गर्दा पूरा शरीर ढाक्ने कपडा लगाउने, सम्भव भएसम्म लामो जुत्ता लगाउने । सकेसम्म भुइँमा नबस्ने । बस्नु परेमा पिरा,गुन्द्री या केही कपडामा बस्ने । आफ्नो वरपर मुसा नआउने व्यवस्था गर्ने ।
के यो रोगको संक्रमणबाट मृत्यु हुन्छ ?
हो,यो रोग लागेकै कारण मानिसको मृत्यु भएको पनि छ । यो रोग सबै उमेर समुहका मानिसमा देखा पर्न सक्छ । यो रोग लागेर बेलैमा उपचार हुन सकेन भनी बिस्तारै शरीरका कलेजो, फोक्सो मस्तिष्क लगायतका विभिन्न अङ्गले काम गर्ने नसक्ने अवस्था हुने भएकाले बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ । तसर्थ यो रोग लागेको शंका लागेमा तुरुन्त चिकित्सककोमा परीक्षण गराई चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम उपचार गर्नुपर्छ ।
वर्षाले घर भत्किँदा तीनमहिने बालिकाको मृत्यु